Xog xasaasi ah: Yaa isku diraya Russia & Turkey | Caasimada Online
Home Warar Xog xasaasi ah: Yaa isku diraya Russia & Turkey
Xog xasaasi ah: Yaa isku diraya Russia & Turkey
Washington DC (Caasimada Online) – Xiisad Milliteri ayaa waxay ka dhex aloosan tahay Dowladaha Turkiga iyo Raashiya, kadib, markii ay Milliteriga Turkiga soo rideen Diyaarad Dagaal oo ay Raashiya leedahay, taasi oo la sheegay inay ku xadgudubtay Hawada Turkiga.
Labada Dowladood ayaa isku muujinaya cadowtooyo, inkastoo ay Dowladaha Caalamka ku baaqayaan in xal Diplomaasiyadeed lagu xaliyo Shilkaasi.
Milliteriga Turkiga waxay 20 Taangi u dhaqaajiyeen dhinaca Xuduudka dalka Syria.
Ilo dhinaca Milliteriga ayaa sheegayo in Taangiyadaasi lagu qaaday Tareen iyadoo ay la socdaan Ciiddanka Guutadda Gaashaaman, waxayna u jiheysteen Xuduudka Galbeed ee ay la leeyihiin dalka Syria.
Wararka waxay kaloo sheegayaan inay Turkiga 18 Diyaaradaha Dagaalka u direen si ay Tababar Ilaalo ah ugu soo qaataan meel ku dhow Xuduudka.
Ilo Milliteri ayaa u sheegay Wakaalladda Wararka Anadolu Agency in Taangiyadda loo diray Degmadda Gazientep ee Koonfurta Turkiga, waxayna u sii gudbi doonaan dhinaca xuduudka Syria.
Dhinaca kale, Wasiirka Gaashaandhiga Turkiga, Sergei Shoigu ayaa xaqiijiyey in Gantaalladda casriga ee Difaaca Cirka ee S 400 loo daabulayo dalka Syria ee ay colaaduhu halakeeyeen.
Waxa uu xusay in Taangiyadaasi la dhigayo Saldhiga Ciiddanka Raashiya ku leeyihiin Gobalka Latakiya ee dalka Syria.
Wargeyska The Daily Mail ee ka soo baxa London ayaa qoray in Diyaaradaha Raashiya ee wax bam-gareeya gelbin doonaan Diyaaradaha Dagaalka Raashiya inta ay ku guda-jiraan Hawlgalladda Duullimaadka ee gudaha dalka Syria.
Madaxweyne Valadamir Putin waxa uu sheegay in Markab dagaal loo soo diray Badda Mediterraneanka, si uu heeganku ugu ahaado haddii ay xaalladaha isbedelaan.